နယ်စည်းမခြား မြန်မာ ဘလော့ဂါများ: Mandalay Trip
သူများတွေ ဒီဇင်ဘာမှ အပျော်ခရီးထွက်ကြတယ်။ ကျွန်မကတော့ တာဝန်ကြီး တစ်ခွဲသားနဲ့ မန္တလေးကို ခရီးသွားရတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော ခရီးထွက်ရတော့ စိတ်လေး နည်းနည်း လန်းဆန်းလာပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ မန္တလေးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ကျွန်မ အသွားချင်ဆုံး မြို့တစ်မြို့ထဲက နေရာတစ်ခုပါ။ အဲဒီကို သွားရတိုင်း ကျွန်မ ပျော်တယ်။ ဘယ်နေရာမှ မရောက်ရင်တောင် မန်းလေးကို သွားရတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပျော်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျွန်မ မန္တလေးကို စိတ်မကောင်းခြင်း ကြီးစွာနဲ့ သွားခဲ့ရတာပါ။ ဘာပဲ ပြောပြော မန္တလေးကို တစ်ခေါက် ရောက်ရတာ၊ ဒီဇင်ဘာမှာ ခရီးထွက်ရတာ 2007 ရဲ့ အမှတ်တရ တစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်မ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေမှာပါ။
ဆေးလ်ဗားမွန်းနဲ့ သူ့ချစ်ချစ်လာခေါ်လို့ ဂျပန်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ညဘက်ခဏလေး မုန့်သွား စားဖြစ်ကြတယ်။ စား စား စားကြပါအုံးလား ဟင်! ပြီးတော့ ဘုရားကြီးကို ခဏရောက်တယ်။ မှောင်နေလို့ ဘုရားဖူးပြီးပဲ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
ရွှေမန်းတောင် ဂေါက်ကွင်းကို အလုပ်ကိစ္စသွားရင်းနဲ့က မန္တလေးတောင်ကို လွမ်းလွမ်းနဲ့ ရိုက်ယူခဲ့တယ်။ တောင်ပေါ်တင်ချင်လိုက်တာလေ တစ်ပိုင်းကို သေရော။ ဒါပေမယ့် မတက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.. အလုပ်က ရှိသေးတာကို။
Mandalay Hill Resort Hotel ကြီးပါ။ ခပ်တည်တည်နဲ့ ကိုယ်ပဲ အဲဒီနေရာမှာ တည်းခဲ့သလိုလို လုပ်ချင်လို့ ရိုက်လာခဲ့တယ်။ မိုက်တာတော့ တော်တော် မိုက်တယ်ရှင့်။ ဟိုတယ်လ်ကြီးက..
နေရာတိုင်းမှာ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ရှုပ်ရှက် ခတ်နေတဲ့ မန္တလေးမြို့ကြီးဟာ ဘယ်အချိန်သွားသွား ပြောင်းလဲတယ်လို့ကို မရှိပါဘူး။ မန္တလေးက လူတွေ ချစ်စရာကောင်းတယ် ကူညီတတ်တယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ဘယ်မှာလဲ မန်းသူ၊ မန်းသား မေးရလောက်အောင်ကို မန္တလေးမြို့ကြီးဟာ ရှမ်းတရုတ်တွေ၊ တရုတ်တွေရဲ့ အုပ်စိုးခြင်းကို ခံနေရလေရဲ့။ ထူးခြားတယ်ပဲ ပြောရမလား၊ ထူးဆန်းတယ်ပဲ ပြောရမလား မန်းသူ မန်းသား တွေ တော်တော် ချမ်းတတ်ကြတယ်။ မနက်စောစော ပင့်ဂိုလ်းတို့ အင်္ကျီပါးပါးနဲ့ သွားလာ နေချိန်မှာ အနွေးထည်တွေ ထူထူဝတ်ပြီး ချမ်းနေကြလေရဲ့။ နေ့လည် 12 နာရီထိုး ပင့်ဂိုလ်းတို့ ချွေးပြိုက်ပြိုက် ကျနေချိန်မှာ သူတို့တွေ အနွေးထည် မချွတ်ကြသေးဘူး။ မေးကြည့်တော့ ချမ်းတယ်လေတဲ့….. သြော်! သူတို့ကတောင် မေးသေးတယ် နင်ချမ်းပုံက ဘယ်လိုလဲမှ မသိတာတဲ့။ ငါတို့တော့ တော်တော်အေးတယ်တဲ့။ မန္တလေးအသွား လမ်းပေါ်က မြို့တွေကတော့ တော်တော်အေးတယ်။ ခပ်တည်တည်နဲ့ ရွှီးလိုက်မယ်.. Seoul ကိုရောက်နေသလိုပဲ။ ခိုက်ခိုက်ကို တုန်ရောရှင်။
ရတနာပုံဈေးက ဈေးဝယ်လို့ ကောင်းတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အ၀တ်အထည်တွေပေါ့။ တရုပ်ပစ္စည်းတွေ ပေါသလောက် ဈေးလည်းတန်ပါတယ်။ ဆစ်တတ်ရင်လည်း ဈေးသက်သက် သာသာနဲ့ ၀ယ်လို့ရပါသေးတယ်။ အပေါ်ထပ်က Skywalk Shopping Mall မှာလည်း ဒါပဲ။ အောက်ထပ်က ရတနာပုံဈေးမှာလည်း ဒီပစ္စည်းတွေပဲ ဆိုတော့ အပေါ်မှာ ဒီဇိုင်းကြည့်။ အောက်မှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ၀ယ်၊ မိုက်တော့ မိုက်နေတာပဲ။ ခုတလော မန်းလေးမှာ ခေတ်စားနေတာက ဒူးကောက်ကွေးရယ်၊ ဂွ နားရယ်မှာ စက်နဲ့ အကြေတွန့်ထားပြီး ပန်းတွေ၊ စီးကွင့်တွေနဲ့ အိတ်တွေမှာ အလှဆင်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေပါ။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဆိုင်သွားသွား ဒါမျိုးတွေ ချည်းပါပဲ။ ပင့်ဂိုလ်းတောင် ဂျင်းဘောင်ဘီ Plain လိုချင်တာ ရတာနာပုံဈေး တစ်ခုလုံး တော်တော် မွှေလိုက်ရတယ်။ ဒီရာသီမှာ ဒါမျိုးခေတ်မစား ဘူးကိုရှင့်။ နောက်ဆုံးတော့ Plain Jean တစ်ထည်တွေ့တာကို 8000 နဲ့ရအောင် ဆစ်ပြီး ၀ယ်ခဲ့တယ်။ မိုက်သကွ!
Posted by Pinkgold at 9:36 PM
Labels: မန္တလေး/ မြန်မာနိုင်ငံ
ကျနော့်ရဲ့ ခရီးစဉ် (၂)
ချင်းမိုင်(ဇင်းမယ်) သို့ တစ်ခေါက်တစ်ခါ
Blogger @ Chaung Thar
A Journey to Brisbane !